Shirka arrimaha Doorashooyinka oo ka dhacayo xarunta Afisyooni ee ciidamada cirka | DAMQO.COM - DAMQO TV
Home Wararka Maanta Shirka arrimaha Doorashooyinka oo ka dhacayo xarunta Afisyooni ee ciidamada cirka
Shirka arrimaha Doorashooyinka oo ka dhacayo xarunta Afisyooni ee ciidamada cirka
Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cismaan Abuukar Dubbe ayaa sheegay in dowladdu ay ka go’antahay qabashada doorsaho xor iyo xalaal ah, iyadoo la raacayo heshiiskii 17 September.
Wasiirka oo shir jaraa’id ku qabtay xarunta Wasaaradda Warfaafinta ayaa sheegay in Madaxweynaha dalka uu markale ku baaqay in laga qeyb galo shir looga hadayo arrimaha doorashooyinka, kaasi oo 22-ka bishan ka furmaya xarunta Afasiyoone ciidamada cirka Soomaaliya.
“Madaxweynuhu waxa uu soo saaray bayaan ah in la isugu yimaado shir, kana dhacayo Afasiyoone, dowladda waxa ay diyaar u tahay in doorashada la dhameystiro wixii ka dhiman, shirkana waxa uu socon doonaa muddo labo cisho ah”. Ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta.
Mudane Cismaan Abuukar Dubbe ayaa xusay in Xukuumadda ay soo saartay go’aanno kale oo lagu xoojinayo go’aankii hore ee ay soo saartay ee ahaa in la yareeyo isu imaatannada goobaha dadka ku badanyihiin, isagoo xusay in muddo labo todobaad oo horleh lagu daray go’aankii hore.
“Macalimiinta Iskuulada iyo dugsiyadada waxaa laga rabaa inay qaataan talaalka looga hortagayo COVID-19 muddo labo todobaad gudahooda ah, waxaa kaloo uu Maamulka Gobolka Banadir diyaariyay ilaa iyo 90 goobood oo loogu talagalay in laga qaato talaalka”.
Wasiirka Warfaafinta ayaa ciidamada ammaanka faray inay gutaan waajibaadka kaga aadan go’aanada ka soo baxay Xukuumadda Soomaaliya, waxaana uu faray Maamulada Hoteelada, Garoomada diyaaradaha iyo meelaha kale ee la isugu yimaado inay ilaaliyaan kala fogaanshiyaha oo ay racaan tilmaamaha caafimaadka la xiriira.
Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cismaan Abuukar Dubbe ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku kalsoontahay go’aanada ka soo baxa maxkamadda Caddaaladda Adduunka, isla markaana ay ka dhowrayaan natiijada ka soo baxaysa, waxaana uu wax lagu xumaado ku tilmaamay qoraal ka soo baxay Kenya oo baalsan hannaanka diblomaasiyadda.
“Waxaan ka hadlayaa warqad shalay Kenya ka soo baxday, waxa ay ka turjumeysaa mid aan ku saleysneyn nidaam diblomaasi ah, wey tegi weeyeen Maxkamadda, go’aanka Maxkamadda waan taageersanahay, qodobka ay cusnanayaan waa mid waxba kama jiraan ah, waayo Golaha shacabka aqlabiyad ayay ku diideen” ayuu hadalkiisa ku daray Wasiirka Warfaafinta.
Wasiirka ayaa uga mahadceliyay wafdiga uu hogaaminayo Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed iyo qareenada Soomaaliya u doodayay.